सुमला- कोपिला - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — यी हुन्, सुमला साम्पाङ राई । उनको घर इलाम जिल्लाको देउमाई नगरपालिका– २ मा पर्छ । आमा वुबाकी यी कान्छी छोरी अहिले १५ वर्षकी भइन् ।
उनको कम्मरमुनिको भाग चल्दैन । त्यसैले हिँडडुल गर्न सक्दिनन् । ह्वीलचेयरमा बस्छिन् । बिरामी परेकैले उनले ३ कक्षासम्म मात्र पढ्न सकिन् । तैपनि असाध्यै राम्रा चित्र बनाउँछिन् ।
‘म तीन कक्षासम्म पढ्दा हिँड्न सक्थेँ । त्यसपछि खुट्टा कमजोर भए र हिँड्न सकिनँ अनि पढ्न छोड्नुपर्‍यो, उनी भन्छिन्, ‘उपचार गर्दा पनि निको भएन । हातहरू पनि खासै बलिया छैनन् । तैपनि पनि म चित्र बनाउन सक्छु । चित्र बनाउन पाउँदा खुसी लाग्छ ।’
सुमलाको साथीरूसँगै विद्यालय गएर पढ्ने रहर पूरा हुन पाएन । तैपनि उनी घरमै किताब पढिरहेकी छन् । घाँटीको पछाडिपट्टि अप्रेसन गर्दा खुट्टा नचलेर उनी हिँड्न नसक्ने भएकी हुन् ।
सुमला दिनभरि ह्वीलचेयरमा बसेर राम्रा राम्रा चित्र बनाउँछिन् ।
भगवान, जनावर, चरा, फूल, प्रेमीप्रेमिका आदिको चित्र बनाउन उनलाई मन पर्छ । घरमा रोपेका फूल हेरेर रमाउँछिन् । बाल गीतहरू सुन्न मन पराउँछिन् । कोही भेट्न गयो भने खुसी हुन्छिन् । आफ्ना चित्र हेर्न अनुरोध गर्छिन् ।
किताब पढ्छिन् । हिँड्न नसके पनि निराश हुन्नन् । केही न केही नगरी समय बिताउन्नन् । कहिल्यै कसैसँग रिसाउन्नन् । हाँसेर बोल्छिन् । त्यसैले उनको अनुहार जहिल्यै उज्यालो देखिन्छ ।
गाउँको एउटा कुनामा बस्ने भएकाले उनी चित्र बनाउन चाहिने गुणस्तरीय रङ र ड्रइङ पेपर सजिलै उपलब्ध छैन । जे उपलब्ध छ, त्यसैबाट पनि आफ्नो कला देखाउँछिन् । हिँड्डुल गर्न नसक्ने भए पनि उनको सिर्जनामा कुनै कमी देखिन्न ।
सुमला भविष्यमा सफल चित्रकार बन्न चाहन्छिन् । आफ्ना चित्र सबैले देखून् र तिनीहरूबाट केही न केही सिकून् भन्ने उनको चाहना छ । ‘लगनशील भएर निरन्तर लागिपरे भने कसो नसकँुला त ?’ उनी भन्छिन्, ‘म मेरा साथीहरूलाई पनि यही सल्लाह दिन्छन् । हामी सबै आजैदेखि असल कामका लागि मिहिनेत गर्न थालौँ है ।
भाद्र १०, २०७५ रेजिना पाण्डे चित्र : कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, रेजिना पाण्डे चित्र : कृष्णगोपाल श्रेष्ठ
काठमाडौँ — एउटा घना जंगल थियो । जंगलमा थुप्रै पशुपन्छी थिए । सुँगा, मैना चरा, सिंह, मृग, स्याल, भालु, वाघ, चितुवा, जरायो हात्ती जस्ता जनावरहरू बस्थे । सबै पशुपन्छी आन्नदको जीवन निर्वाह गरेर बसेका थिए ।
त्यसै जंगलको एउटा कुनामा हिम्बु नाम गरेको जरायोको परिवार पनि थियो । हिम्बु जरायोको हजुरबुबा, बुबा र बहिनी चञ्चली । हिम्बुको आमालाई सिकारीले गोली हानेर मारेका थिए ।
सिकारीहरूले उनका बुबालाई लखट्दा बुबाको पनि दाहिने खुट्टा भाँचिएको थियो । हजुरबुबा बूढो र बहिनी चञ्चली सानी भएकीले हिम्बुको काँधामा नै उनको परिवारको जिम्मेवारी थियो ।
तर पनि हिम्बुले सिंगो परिवारको दु:खसुखमा साथ दिएको थियो । सबै परिवारलाई खुसी बनाएको थियो ।
एक पटक हिम्बुको परिवार जंगलमा रमाइलो गरिरहेको थियो । परिवारका सबै जंगलका मीठामीठा खानेकुरा खुला ठाउँमा बसेर खाँदै रमाइलो गरिरहेका थिए ।
त्यही बेला एउटा चतुर धूर्त भालु घुमीफिरी त्यहाँ आइपुग्यो । जरायोको परिवारले मीठामीठा खाने कुराहरू खान लागेको देखेर भालुको जिब्रो लोभले रसाउन थाल्यो । अनि उसले जरायो परिवारको खाना कसरी खाने भनेर जुक्ति लगाउन थाल्यो ।
भालु जरायोहरूको नजिक गयो । उसले मीठा कुरा गर्दै भन्न थाल्यो, ‘हेर जरायो साथीहरू हो † तिमीहरूलाई सधैं एकै नासको खाना खाँदा दिक्क लाग्दैन ? मलाई ता साह्रै दिक्क लाग्छ । म त सधैं नयाँ नयाँ खाना स्वाद फेरीफरी खाना खान्छु । हिजो मैले पाउरोटी खाएको ।
अघि मात्र मासु भात खाएको । मेरो ओडारमा त कति मीठामीठा खानेकुराहरू छन् । म त एउटै खाना कहिल्यै दोहोर्‍याएर खान्नँ । योभन्दा कति मीठो खाना त मेरो ओडारभरि नै छ । यस्तो सधैं खान पाउने खाना त जंगलभरि सधैं पाइहाल्छ नि । नयाँ टेस्ट पो गर्नुपर्छ । जाउँm मेरो ओडारमा गएर मीठामीठा खाएर आउँm ।’
भालुको कुरा सुनेर जरायोहरू चकित परे । उनीहरू मुखामुख गर्न थाले । भालुले भन्यो, ‘किन आनाकानी गर्दै छौ ? धेरै नसोच । यस्तो मौका फेरि आउँदैन । मेरो कुरामा विश्वास गर । म कहिल्य झुटो बोल्दिनँ । झन् तिमीहरू त मेरो छिमेकी र असल साथी पनि हो । बरु छिट्टै हिँड । नत्र अरूले खाइदेलान् ।’
छट्टु भालुको कुरामा सोझो जरायोको परिवारले विश्वास गर्‍यो । मीठो खाने रहरमा आफूले मिहिनेत गरेर ल्याएको खाना छोडेर उनीहरू भालुको पछि लागे ।
आफ्नो ओडार नजिकै पुगेपछि भालुले भन्यो, ‘जरायो साथीहरू हो म अरू पनि मीठो खाना ल्याउँछु । तिमीहरू मेरो ओडारमा गएर खाँदै गर । म केही बेरमा आउँछु ।’ यति भनेर भालु उल्टो बाटो लम्कियो ।
जरायोहरू मीठो खान पाइने आसमा भालुको ओडारभित्र पसे । तर उनीहरूले त्यहाँ कुनै खानेकुरा देखेनन् । नचाहिने घाँसदाउरा बाहेक भालुको ओडारमा केही पनि थिएन । ओडार सडेगलेका सिनोहरूले गनाएको थियो ।
जरायोहरू जिल्ल परे र फर्के ।जरायोहरू आफ्नो खाना छोडेको ठाउँमा आइपुग्दा त्यहाँ एउटै खानेकुरा थिएन । जरायो परिवारले बल्ल थाहा पायो, धूर्त भालुले हामीलाई झुक्कायो र हाम्रो सबै खानेकुरा खाइदियो । उनीहरूले भालुको लहैलहैमा लागेर आफू उल्लु भएको पत्तो पाए ।
‘हामी सोझो भएकाले भालुले हामीलाई झुक्कायो । त्यसलाई खोजेर जसरी भए पनि कडा सजाय दिनुपर्छ,’ हिम्बु जरायोको बुबाले भने । जरायोहरू मिलेर भालुलाई जताततै खोज्न थाले । भालु आफ्नै ओडारमा आएर मस्त निदाइरहेको थियो । उनीहरूले भालुलाई घिसार्दै ल्याएर बरको रूखमा बाँधिदिए ।
चञ्चलीले भालुलाई गाली गर्दै भनी, ‘दादाले कति दु:ख गरेर खोजेर ल्याएको खाना हाम्रो खाइदिइस् । तँ बदमासलाई अब सधैंभरि यही बाँधिदिन्छु बुझिस् ।’ उसले भालुको गालामा एक थप्पड पनि लगाई ।
हिम्बुको बुबाले पनि सही थाप्दै भने, ‘यस्तो ठगलाई त राम्रै सजाय दिनुपर्छ । अर्काले दु:ख गरेर खोजेको खानेकुरा खाने ? जब हामी दु:ख गरेर आहारा जुटाउन सक्छौं भने तँ चै किन अरूको खानामा आँखा लगाउँछस् ? तँ जस्ताले गर्दा नै हामी जस्ताको आहार लुटिएको छ । तँलाई ठुलै सजाय दिनुपर्छ ।’ यति भनेर उनले दुई झापड लगाए ।
त्यसपछि भालुले रुँदै भन्यो, ‘मलाई माफ गर । म अबदेखि कहिल्यै झूटो बोल्दिनँ । कसैलाई झुक्याउने पनि छैन । म पनि आफ्नै मिहिनेतले खान्छु ।’
यति भन्दै भालु ठुलो आवाज निकालेर रुँनकराउन थाल्यो । उसको लामो विलाप सुनेर हिम्बु जरायोको हजुरबालाई भालुप्रति दया पलायो । उनले भने, ‘आज तँलाई माफ दिन्छौं । फेरि पनि यस्तै बदमासी गरिस् भने हामीबाट ठूलो सजाय पाउँछस् ।’
यति भन्दै उनीहरूले भालुको डोरी फुकालिदिए । त्यसपछि भालु लाजले शिर झुकाउँदै आफ्नो ओडारतिर लम्कियो । त्यस दिनदेखि त्यो भालु कहिल्यै जंगलमा देखिएन ।